DDoS Weerar - Khabiirka Cilmi-baarista ayaa sharraxaya sida loo ilaaliyo Your Server
Ammaanka Webka ayaa noqday arrin muhiim ah oo loogu talagalay websaydhka sanadihii la soo dhaafay. Tani waa sababsi ay ugu hanjabaan weerarrada jebinta jebinta ee ay geystaan ​​dambiilayaasha internetka. Mid ka mid ah dhibaatooyinka asaasiga ah ee webmaster kasta waa Qaybinta Adeegga Diidmada(DDoS).
Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,Andrew Dyhan, wuxuu siinayaa aragti ujeedada weerarka DDoS si uu kaaga caawiyo joojinta sir-ilaaliyeyaasha in ay hoos u dhigaan server-yada.
DDoS waa nooc caadi ah oo weerar ah oo ay wajahayaan webmasters. Heerka ugu hooseeya, weerarkawaxaa loogu talagalay inuu hoos u dhigo boggaaga, hase yeeshee waxaa suuro gal ah in uu burburin karo goobtaada isla markaana uu ka dhigayo mid aan la booqan karin.
Marka ay dhacdo weerarrada DDoS ee lagu cabiray codsi shabakadeed, software wuxuu helayaaoo ay ka buuxsameen khayaanada. Natiijada, codsigu ma awoodo inuu u adeego boggaga internetka ee haboon.
Si aad ugu riixdo server-ka codsigaa inuu shil galo, weerar weerar DDoS ah oo soo socda:
Meel adag oo adag
Nidaamka xayiraadda dulsaaridda
Barkadda Xiriirka Database
DDoS weerarada ka dhanka ah codsiyada webka waxaa ka mid ah:
1. In la joojiyo xiriirka macluumaadka codsiga iyada oo la abuurayo weydiimaha CPU-baahsan.
2. Khashkhashaadda adeegga qof ama nidaam ay ka mid yihiin in la joojiyo isticmaalahahelitaanka goobta oo ay isku dayayaan isku-daygal aan ku geli karin taasoo keentay in la joojiyo xisaabta..
3. Daadinta codsiyada webka ee dadaalka ah in la joojiyo taraafikada caadiga ah ee ka soo baxa goobta.
weerarrada DDoS waxay noqdaan habka xulashada kambiyuutarrada sababta oo ah waxay ku dhow yihiinsuurtagal maaha inaad ka hortagto, raqiis ah inaad fuliso oo aad saameeyso isticmaale badan. Waqtiga intiisa badan, dhammaan khabiirada xirfadlayaasha ah waa baahi ku filaniyo bartilmaameed gaar ah si ay u qaataan goobo aan rasmi ahayn.
Sidee ayay weerarradu u shaqeeyaan?
Weerarrada DDoS waxay ku bilaabmaan hal hacker ama dhowr ka mid ah joornaalka oo abuuraya taxane ahnidaamyada bot. Kacaanku wuxuu amar ku bixiyaa khadad gaar ah si uu u wado gaadiidka meel gaar ah si joogto ah oo isku mid ah kaas oo sida caadiga ahcadaadiska serverka goobta.
Haddii nidaamka botigu leeyahay shabakad weyn, cadaadiska ku jira server-yada ayaa keeni karameesha hooseysa. Inkasta oo weerarradani aysan khasab ku ahayn inay soo bandhigaan macluumaadka shakhsi marka la barbar dhigo farsamooyinka kale ee hacking, haddana waxay leeyihiin wax xunsaameyn ku yeelanaya shirkadaha badanaa ku tiirsan akhriska iyo iibinta internetka. Weerarrada DDoS waxay ku kici karaan ganacsi ka badan $ 500,000.
Weeraradaas waxay keenaan khasaari kara sumcadda astaanta iyo bixintaaragtida qaldan ee dadka isticmaala. Marka ay gasho shirkadaha ganacsiga, waxay ku siiyaan tartamayaashaaga gees ahaan adigoo awood u siinaya inay yeeshaan xoog,sumcad ganacsi oo sumcad leh marka la barbardhigo calaamadda aan la isku halleyn karin. Xaaladaha qaarkood, dambiileyaasha internetka waxay ku hanjabaan kuwa websaydhka inay sii wataankharaajinta adeegyada ilaa ay ka helaan lacag go'an oo gaar ah.
Intaa waxaa dheer, xogta laga helay weerarka DDoS waxaa isticmaali kara shabakadaha khayaanada si ay weeraraanbogga mustaqbalka. Caadi ahaan, weerarrada dabagalka ayaa si fudud u furfurnaan ah oo dhacaya markii weeraryahannadu ogaadaan in goobta ay tahay mid aad u nugultaasoo ka dhigaysa bartilmaameed sahlan oo loogu talagalay weeraro adag oo mustaqbalka ah.
In kastoo weerarrada DDoS ay adag tahay in laga hortago, waxaa lagu maamuli karaa iyadoo la isticmaalayo SiteLock'snidaamka ammaanka. Xalalka laga helo nidaamka nabadgelyada ee SiteLock ayaa awood u leh inay aqoonsadaan oo ay ilaaliyaan gaadiidka aan loo baahneyn ee soo saaraGoobaha laga soo galo goobtaada adiga oo aan faragelinin taraafikada caadiga ah.
Nidaamka Nabadgelyada SiteLock wuxuu ka ilaaliyaa ganacsiyada noocyo badan oo xaasidnimo lehweerarada ay ka mid yihiin noocyada suurtagalka ah ee weerarka DDoS adigoo isticmaalaya Internet Protection Protection, DNS iyo Badbaadinta Infrastructure kuwaas oo ah kuwa ugu badanqaybaha muhiimka ah ee difaaca DDoS Source .